KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Maalinta Calanka Soomaaliyeed
Sunday 12 October 2014 14:22
Calankeena Buluuga ah oo xaqiiqdii aragtidiisu Maanta Qofka Muwaadinka dhabta ah ee nazahan ayaa ku abuursaysa jidhiidhico murugo wadata iyo ciil.
Waxaa Aasaasay Calankakeena fikradiisana lahaa Ilaahay ha u naxariistee Maxamed Cawaale Liibaan Taariikhdu markey aheyd 12/Oktobar 1954-Kii, waxaana laga dhex doortay dhowr astaamood oo maalinkaas la horgeeyay baarlamaankii kumeel gaadhka ahaa.
Wuxuu matalayaa guud ahaan Ummadda Afka Soomaaliga ku hadasha qolo kasta iyo dal kasta Maanta ha hoostagaane, wuxuuna himiladiisu ahayd in uu meel iskugu keeno.
Waxaa xad-gudub balaadhan Calankeena ku sameeyay Kooxaha Dalkeena Hooyo rogaya, kuwaas oo u diidan Maanta inuu Calankan ka dul babado ciidii iyo geyigiisii iyagoo kuwii ugu danbeeyey ee “wadaad” ku sheegyaasha ahaana ku badaleen mid aan matalin dadka iyo dadlka ..... Kuwii ka horeeyayna hadalkoodaba daa !!
Waa Calan Amaan loo dhameeyay oo ilaahay ha u Naxariistee Abwaan Timo-cadde yidhi “Sankuneefle dhamaantii iyo khalqiga kii usinaayoow, Soomaaloo Calan taagta saakaa noogu horeysee, saq dhexaanu ahayne, kii soo saaray cadceedoow, sareeyoow ma nusqaamoow, aan siduu yahay eegnee , kana siib kana saar”.
Abwaan horena wuxuu yidhi “Haddaan gabayga uurkoo bukiyo arami kaa keenin, amaan olol jaceyl iyo xanuun kugu ijbaaraynin, afkuun baad la leedahaye tixihu arar ma yeeshaan, anigana dhibaatada lagu hayo wadankayga iyo calankayga ayaa iga keeney afar-tan gaaban oo aan kula xanuunsanayo calankayga cadibaada lagu hayo”.
Tixda Gabay ee Abwaan TIMACADE:
samada kii u ekaayoow,
axaad saaka ku toostiyo,
axaad soo martay oo dhan,
anba waan la socdaaye,
Sida aad tahay maantiyo,
ima seegana oo,
sanadihii u danbeeyay,
wixii aad ku sugnayd,
anba waan la socdaayo,
kaama seexdo habeene,
iiga yaal sawirkaagoo,
inaad soo noqotoo,
samadaa ka hilaacdaan,
saatir kaaga baryaayo,
silic kuuma rajeeyee,
Cabdilaahi suldaan iyo,
sareeyoow ma nusqaamoow,
kana siib kana saar,
markaan soo yar xasuustaan,
naftu seexadka diidaye,
Seef laboodku dhammaan,
silic bay ku badeenoo,
calan aan sal lahayn,
inay soo sawirteenoo,
adna ay salka hoosiyo,
sagxadaa ku dhigeen,
sareeyow maqlay taasnee,
Si kaloon ku idhaahdo,
saaka kuu garan maayo,
saq-dhexaan ku jirnaayo,
saadaashaadu ma fiicnee,
aduunkoo dhan safaarad,
saraakiil & ciidan,
salaan kuu fidinayn,
ubadkoo saf utaagan,
sacab kuu tumahayn,
allow yaanan sagootin,
inta aanan socdaalin,
Sameynta Dharka Hidaha iyo Dhaqanka oo ka dabar go’aya Soomaaliya - Warbixinta KM
Magacyada iyo Qabaa’ilada Xildhibaanada la dhaariyay // Kuwa loo diiday kamid Noqosha